Sishubile isimo elokishini laseMbali umphakathi uvuka umbhejazane | News24
Sishubile isimo elokishini laseMbali umphakathi uvuka umbhejazane
Mbali - Zivuke umbhejazane izakhamuzi zaseMbali zikhalaza ngogesi odla kakhulu ephaketheni futhi zithembisa ukumisa konke ukusebenza kuleli lokishi uma uMasipala engaluxazululi lolu daba, kubika i-KZN Eyethu.
Abasebenzi, izingane zesikole ezifunda ngaphandle kwaleli lokishi zibambezelekile, kanti abaningi baqome ukuhlala emakhaya emuva kokuthikamezeka kokuhamba kwezimoto njengoba bekuvalwe imigwaqo eminingi ephumayo kuleli lokishi.
Ngokusho kwezakhamuzi, ukubiza kukagesi sekwenza ukuthi bangakwazi ukufeza ezinye izidingo.
“Uma ukhokha u-R100 uthenga ugesi, uthola cishe oka-R60, sifuna ukwazi ukuthi lena enye imali idliwa yini,” kusho isakhamuzi salapha esingafunanga ukuba igama laso lidalulwe.
OLUNYE UDABA:Izakhamuzi zishise isigubhu sikagesi kunombhikisho
Esinye isakhamuzi sithe sekunesikhathi belukhuluma lolu daba nekhansela lendawo kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya.
“Sifuna iMeya ingenelele, ngoba uma kungenzeki lokho siyaqhubeka nalo mbhikisho,” kusho esinye isakhamuzi.
Amaphoyisa asebenzise izinhlamvu zenjoloba kanye nesisi esikhalisa unyembezi ukuhlakaza ababhikishi. Abashayeli bamatekisi bakhale kakhulu ngokuthikamezeka kokusebenza abathe kube nomthelela kubona.